I-Semalt Expert icacisa indlela yokukhupha i-Mac yakho kwiiVirus
Ukuba umntu ufumana ingxaki kwi-Mac yakhe, okanye ukhathazeke ukuba ingaba ne-malware,esi sikhundla sinceda abantu bayisuse ngaphandle kwesihlawulelo okanye ngexabiso elincinci. Okubaluleke ngakumbi, kukho amanyathelo okuqinisekisa ukuba ayenzeki kwakhona.Akunakwenzeka ukuba umntu unama-HIV. Nangona kunjalo, amathuba okuwadlulisela kwi-PC aphezulu kakhulu. Akuyi kuthethaukuba ayikho inkqubo ye-malware eyenzelwe iMacs. Kuphela kuphela ukuba abasebenzisi abalujoliswe kakhulu yibo abasebenzisa iPC ngenxa yobuninzi babo - speak to a computer.
Ukuthandwa kwe-Mac kwiminyaka edlulileyo kuye kwaguqula ingqalelo yabantu ababikunye neethagethi zabo emva kokunyuka imihla ngemihla. Kule nqaku, uJulia Vashneva, ingcali ehamba phambili iSemalt ,ijolise kwi-malware kunye neentsholongwane ezichaphazela ii-Mac.
I-Malware ihluke kwi-software enobungozi njengentsholongwane. Isizathu siukuba ayifaki kwikhompyutha ngaphandle kolwazi lomsebenzisi. Kwiimeko ezininzi, iguqulwe njengesofthiwe esilungileyoumsebenzisi. Kungenzeka kwimeko yesibhengezo, okanye i-imeyile, leyo ingakholisa umsebenzisi ukuba afake inkqubo ethile. Ukususela ngelo xesha, iqokelelaulwazi oluyimfihlo kwiikhompyutha.
Ingxaki ye-malware ye-Mac kukuba ithatha indlela efanayo yezintoumntu unqwenela ukusebenzisa ngokuchasene nengxaki efana neprogram ye-malware. Hackers ithatha amawebhusayithi afanelekileyo kwaye uqondise kabusha isivakashiindawo eyahlukileyo apho bazenza ngathi bahlalutye kwaye bafumane i-malware kwi-Mac. Ukongeza kule nto, yenza isiluleko sesoftware, oko kukuthii-malware ngokwayo. Ukuzenza ukuzitshekisha nokulungisa iingxaki, kunokucela ukuba uhlawule umrhumo.
Ukususa i-malware ye-Mac mahhala
Ukususa isofthiwe ye-Mac, okanye i-malware ayifuni ukuba umnini asebenzisedime. Abasebenzisi ke banconywa ukuba bangenise ulwazi lwabo lwekhadi lesikweletu kwiprogram okanye iwebhusayithi ethi banesisombululokwingxaki yekhompyutha.
Nangona wenza njalo, ukuba umnxeba ovela kumntu othi ufumene unobungoziisofthiwe kwikhompyutha ivela, yinto eyahlukileyo kumxholo kwaye kuya kuba ngcono ukuphelisa umnxeba ngokukhawuleza..
Nazi izinto ezokuzenza xa iwebhusayithi ethile ikhupha isilumkiso esithi ifumene iprogram enobungozi:
1. Yeka isiphequluli.
2. YiNtloko kwiFowuni yeFowuni kwaye udibanise zonke iifayile zokufaka ezingafuneki kwi-Bin.
3. Ngaphandle kweTrash.
Ukuba umntu sele usele iprogram engalunganga ngephutha, amanyathelo alandelayo kufuneka ancede:
1. Cinezela "Lawula + Shift + U", ukuvula ifolda yeNkonzo.
2. Vula umSebenzi womsebenzi uze ukhethe zonke iinkqubo eziqhubayo.
3. Khangela igama lenkqubo kwiluhlu kwaye nqakraza kwi "Phuma Inkqubo".
4. Kwifowulda yezicelo, fumana iinkcukacha zohlelo lokusebenza uze uyihudule kwiDoti uze uyilahle.
Ukukhusela iMac kwi-malware
Okwangoku, i-Mac ikhululekile kuyo yonke i-malware, kwaye yinto enengqondo ukuba umntu afuneukukhusela oku kungabikho kwakhona. Iingcebiso ezingezantsi ziya kugcina iMac iphephile kwi-malware ezayo.
Gcina iMac ihlaziywe ngamaxesha onke.
Tshintsha ukuhlaziywa ngokuzenzekelayo.
Yisebenzise kuphela iinkqubo ezivela kubathuthukisi abathembekileyo.
Faka i-software ye-antivirus software